Imidlalo emi-5 yasimahla ngenkxaso yeLinux | Ubunlog
Xa Sithetha ngemidlalo kwiLinux Into oza kuqala ukuyicinga kukuba akukho nto inomdla okanye mhlawumbi ucinga ngeWayini kwangoko, ngelishwa isengumbono wokuba abaninzi abaphumi entlokweni yabo.
Oku kungenxa yokuba ukuba ixesha elide iLinux ayinayo ikhathalogu elungileyo yemidlalo Kwaye yile nto ndithetha ngayo kwiminyaka eli-10 eyadlulayo, apho ufuna ukonwabela isihloko esihle kuye kwafuneka wenze iinkqubo ezininzi zangaphambili kwaye ulinde yonke into ukuba iqhubeke ngokugqibeleleyo ngaphandle kweziphazamiso.
Namhlanje itshintshile, nangona kungenjalo kwaphela ngokuhamba kwexesha, izihloko ezitsha ziyaqhubeka ukongezwa ezinokuthi zenziwe ngokwendalo kwiLinux kunye Inxalenye enkulu yale esinokuyinika iqonga leStam kunye nenyani yokuba ithathe iLinux njengesiseko sokwenza eyayo inkqubo.
Kulungile namhlanje Siza kwabelana nawe ngezihloko ezithile esinokuzifumana kwi-Steam kunye nezinye esingenako ukuzenza. Baxhomekeke kuyo, ekhululekileyo ngokupheleleyo kwaye ilunge kakhulu ukuba ube nexesha lokuzonwabisa.
1 Iindudumo zeMfazwe
3 IDota 2
5 0 AD
Ukuba eujonge isihloko esinomtsalane ngokwenyani esekwe emfazweni, zama iMfazwe yeNdudumo.
Imfazwe yeNdudumo ngumdlalo wabadlali abaninzi kwi-Intanethi, Lo mdlalo ugqibelele kubathandi bemidlalo yemishini, Imfazwe yeNdudumo iseti kwixesha lomkhosi ngo-1940/1950. Uya kudlala umdlalo ngeenqwelomoya, iitanki, abalinganiswa kunye nezixhobo ezinokuhlaziywa kwaye ufumane umonakalo owenzekayo.
Kusimahla kwaye unokhetho lokuthenga izixhobo ezingcono kunye nezixhobo, kwaye usete umxholo wakho kumdlalo othengiswayo.
Khuphela iMfazwe yeNdudumo
Ukoyika Ngumdlalo we-2D wokudubula ukuba ukuba udlale iContra iya kukukhumbuza kakhulu, kodwa hey uloyiko lungcono kakhulu. Esi sihloko sinomdlali ongatshatanga, iMMO, intsebenziswano kwi-Intanethi, abadlali abaninzi basekhaya, kunye neemowudi zemidlalo yabadlali abaninzi kwi-Intanethi.
Abadlali banokumilisela izicwangciso zesiko naxa besebenzisa ukuthenga ngaphakathi nohlelo ukuphucula amathuba abo okuphumelela.
IDota 2 ngumdlalo wabadlali abaninzi weSteam ecace gca njengomsebenzi wobugcisa njengoko ikwazile ukuphumelela ukuya kuthi ga kubadlali abangama-800,000 yonke imihla. Ukuba sesona sihloko saziwayo sohlobo lwaso, I-Dota 2 ngokuqinisekileyo kufuneka ibe nayo kwabo bangaze banikezele ngokukhawuleza okukhulu.
Le yi-3D isometric yeqhinga lokwenyani lexesha lesenzo somdlalo kwaye sisiphelo semodeli yeWarcraft III, uKhuselo lwaMandulo.
Ngokusisiseko injongo yomdlalo kukudlala kwiqela labantu aba-5 ukutshabalalisa iqela elichasayo kunye nokuqokelela izinto ezilungileyo zedijithali apha endleleni.
Khuphela i-Dota 2
Super Tux Kart Ngumdlalo othandwayo phakathi koluntu lokudlala lweLinux. Oku engumdlalo wokubaleka Umdlalo wekart onabalinganiswa babo yimascots zezinye zeeprojekthi zesoftware ezaziwayo zasimahla ezinje ngeTux, i-GNU, idemon ye-BSD kunye nendlovu ye-PHP.
Ngeendlela ezingaphezulu kwama-20 zomdyarho, iimowudi ezi-6 zomdlalo, kunye nokukhethwa komdlalo okuphuculweyo ngokukhutshwa ngakunye kohlaziyo, iSuperTuxKart yenzelwe abadlali abonwabela ukonwaba kart racing.
0 AD yaqala njengemodyuli yobudala bamaKumkani II emva koko yagqalwa njengenye yeeprojekthi zomdlalo wesoftware ezisimahla.
0 AD ngumdlalo obandakanyekayo wemfazwe obeka abadlali kwixesha eliyimbali eliyimbali. Sukuyenza impazamo, nangona kunjalo, impucuko ibikade iyinyani, njengoko abaphuhlisi bathatha ixesha labo bebandakanya iimephu, izakhiwo, izikhumbuzo zembali, njl.
Khuphela i-0 AD
Nangona olu luhlu lincinci kwaye ikhathalogu esifumana yona ngeStam ibanzi kakhulu, ezinye zazo zibandakanyiwe apha ziyaziwa kakuhle.
Ukuba uyazi nasiphi na esinye isihloko esinokubandakanya kolu luhlu okanye esinokuthetha ngaso, ungathandabuzi ukwabelana nathi ngezimvo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Imidlalo » Imidlalo emi-5 yasimahla ngenkxaso yeLinux
Ndingowokuqala ukuphawula yahoo
Molo !!, bendifuna ukongeza ukuba uninzi lwemidlalo inokukhutshelwa, (enye yeyam minecraft Pd: minecraft ndinayo kwi-linux
I-Minecraft inokuqhuba kuyo nayiphi na inkqubo yokusebenza apho kufakwe khona iJava.
Kufuneka wenze ntoni emva kokufaka Ubuntu 18.04 LTS?
Uyifaka njani iLubuntu 18.04 kwikhompyuter yethu